Mayelana NATHI - Tianjin TheOne Metal Products Co, Ltd.
Isitampu SaseJalimane Sohlobo LaseGerman
Isitampu SaseJalimane seHump Hamp nge-Handle
Uhlobo lweMelika Hampampamp
Ikhampasi YaseMelika yohlobo lweHose Handle
I-European Type Hose Clamp
I-Hard Duty American Uhlobo Lwe-Clamp
Isiqu saseBrithani uHulumeni Isitembu
I-Blue Housing yaseBrithani Uhlobo Lwamaxhaphozi
I-Robust Pipe Clamp
I-single Bolt Double Band Clamp
Isikebhe Sokuphayiza Esinobumba
I-Double Bolt Double Band Pipe Clamp
T Type Clipe Clamp
T Thinta Isiqu Sombhobho Esinentwasahlobo
I-V Band Pamp Clamp
I-Mangote Pipe Clamp
U-Bolt Pipe Clamp
I-Hanger Pipe Clamp
Isitampu Sokuphamba Kwesitayela
Isitembu Sepayiphu Nge-Rubber
I-Double Wire Hose Clamp
I-French Double Wire Hose Clamp
I-Mini Hose Clamp
I-Ear Hose Clamp
Isithabathaba se-Spring Hose
ITianjin TheOne Metal Products Co, Ltd. etholakala eZiya Recycled Economic Zone Zone, ekuqaleni eyakhiwa ngo-Oct, 2008, futhi yaqala ukuvula imakethe yasekhaya evela ezinkampanini ezithengisa izinto zonke nezinkampani ezihweba ngazo.
Kusukela ngonyaka ka-2010, sathuthukisa izimakethe zaphesheya, ngasikhathi sinye sasungula iqembu lokuthengisa kwamanye amazwe.
Ngo-2013, Sabamba iqhaza kwiCanton Fair okokuqala, futhi saqhubeka nokwandisa iqembu lethu.
Ngo-2015, waqala ukubamba iqhaza kwimibukiso yangaphandle eprofeshinali.
Ngo-2017, baphendule kwinqubomgomo kazwelonke yokuvikela imvelo,
Sithuthele eNational Recycled Economic Industrial Park --- iZiya Industrial Park. Ngaso leso sikhathi sithuthukise futhi salungisa kabusha ifektri endala ukuze sikhiqize ndawonye.
Ukuze sikhiqize, sabuyekeza imishini, sashintsha kusuka kwinqubo yendabuko yokudlulisa imishini eyodwa kuya kumishini yokuhlanganisa ye-automation, yathuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kokukhiqiza.
Ukulawulwa kwekhwalithi, inkampani ithobela uhlelo lokuhlola ngokuqinile, luzohlolwa kwizakhiwo ezibonakalayo nokwakheka kwamakhemikhali lapho nje izinto ezingavuthiwe zingena efektri; kwinqubo yokukhiqiza, umhloli uzokwenza ukuhlola okungajwayelekile kanye nokuhlolwa kwendawo; imikhiqizo eqediwe izovivinywa, ithathwe izithombe bese ifakwa ngombiko wokuhlolwa yi-QC ngaphambi kokulethwa. Ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo, qinisekisa amalungelo nezintshisekelo zamakhasimende.
Ngo-2019, ukuze kuqhutshekwe nokwenza imakethe ibe ngcono, ifektri iqinisa ukuphathwa, ekuqaleni yakha uhlelo lokuphatha nokusebenza, iqede ukubhalisa uphawu lwentengiso yasekhaya nangaphesheya, ithole ISitifiketi Sokuphakama se-ISO9001 ne-CE Certification.
Ngokuphathwa kwabasebenzi, sithatha "umndeni" njengesisekelo, singabheki ikhasimende ngalinye njengezelamani, kepha futhi sihlanganisa "umndeni" kubasebenzi- ukusabalalisa inhlala-kahle ngamaholide, ukuqeqeshwa ngamakhono ahlukahlukene, ukuhlela ukuhamba kwabasebenzi, ezemidlalo, ukuze abasebenzi bangaba semoyeni othokozisayo wokusebenza, bakhombise yonke imizwa yomsebenzi wokuthi ungumnikazi, bathathe impela imboni njengomndeni.
Kumakhasimende, sihlala sinamathela emgomweni we "ngekhwalithi isisekelo, sibonisa ukubaluleka, sisebenzela ubuhle, ikhasimende kuqala". Ekukhuleni kweminyaka eyi-12, sinamathele kwifilosofi yebhizinisi "yokuqamba imikhiqizo emisha yokuthuthuka, ukuhlanganisa imikhiqizo yakudala ukuze isimamiswe". Ukuqinisa imakethe ekhona, kanti ngasikhathi sinye siyaqhubeka nokukhula siqina.
Ngomncintiswano oqhubeka uvutha kakhulu ezimakethe zasekhaya nakwamanye amazwe, sibhekene nengcindezi nezinselelo ezivela kuzo zonke izici, kepha ngaso sonke isikhathi sigxile esikweni "lasekhaya" futhi sithuthukise indlela yokwenziwa nekhwalithi yomkhiqizo ngokuqhubekayo. Sikholwa ukuthi sizohambisana. sibambisane namakhasimende ethu amadala ngokuzayo, hlangana nabangane abasha bese uthole ukwesekwa kwakho.
ITianjin TheOne Metal Products Co, Ltd. Onke amalungu, niyakwamukela ukubuyela “ekhaya”.